16th September 2021, 10:26 am | ३१ भदौ २०७८
काठमाडौं : संखुवासभा मादी नगरपालिका - १ उम्लिङ खोलागाउँमा एकै परिवारका ६ जनाको हत्या प्रकरणमा प्रहरीले थप एक जना युवकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाले लोकबहादुर कार्कीका भाइलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। लोकबहादुर यसअघि प्रहरीले अभियुक्त भनिएर सार्वजनिक गरिएका व्यक्ति हुन्।
प्रहरीले शुक्रवार नियन्त्रणमा लिएका २५ वर्षीय लोकबहादुरलाई पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरेको थियो। प्रहरीले आइतवारको पत्रकार सम्मेलनमा हत्यामा एक जनाको मात्र संलग्नता रहेको दाबीसमेत गरेको थियो।
'अभियुक्तको भाइलाई केही सोधपुछ गर्नुपर्ने भएकाले नियन्त्रणमा लिएका छौं,' एक नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी अरुण बिसीले भने।
घटनास्थलमा रञ्जनाले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल भने फेला परेको थिएन। त्यसपछि प्रहरीले हराएको मोबाइल खोजी गरिरहेको थियो। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका लोकबहादुरका भाइ नरेशको साथमा हराएको मोबाइल फेला परेको प्रहरीको दाबी छ।
'उसको घरबाट हराएको मोबाइल फेला परेको छ। त्यसैले सोधपुछ गरिरहेका हौं,' डिआइजी बिसीले भने।
लोकबहादुर आफ्ना बाबु र भाइसँग बस्दै आएका थिए। उनकी आमाको केही महिना अगाडि लडेर मृत्यु भएको थियो। तर घटना भएको दिन उनका भाइ र बाबु चिया खाएर घाँस काट्न निस्किएको प्रहरीमा बयान दिएका थिए। त्यसैले उनको घटना संलग्नता कस्तो प्रकार को हो ? वा आशंका मात्र हो भन्ने खुलिसकेको छैन।
अभियुक्त कार्कीले योजनाबद्ध रूपमा नभएर आवेगमा आएर तत्काल त्यस्तो घटना भएको प्रहरीको दाबी थियो। त्यस्तै अभियुक्तले घटना गराएको स्वीकार गरिसकेको प्रहरीले बताएको छ।
लोकबहादुरले दाउराको घारबाट चिर्पट निकालेर टाउकामा हानेर हत्या गरेको र त्यसपछि उनले हत्या गरिएको चिर्पट आगोमा डढाएको देखिएको बताए थिए।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), सङ्घीय इकाई प्रहरी कार्यालय धरान, जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाबाट खटिएको अनुसन्धान टोलीले पाँच दिनको अनुसन्धान पछि २५ वर्षीय लोकबहादुर कार्कीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
सम्बन्धित समाचार : प्रहरीलाई बयानकै भर, अझै छन् अनुत्तरित प्रश्न : के एक्लैले ६ जनाको हत्या गरे? अरु छिमेकीले किन देखेनन् या सुनेनन्?